LEDs ဖြင့်ကြီးထွားလာရန်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ - News - Light On
အလင်းရောင်သည်မိုးလုံလေလုံစိုက်ပျိုးရေးတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းပွင့်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလင်းအဆင့်သည် ၇၅၀ မှ ၁၀၀၀ µMoles / m2 / s (PPFD) ကြားတွင်ရှိသည်။ သင်၏လ်တာတာမှအလင်းသည်သင်၏မြတ်သောအလင်းတန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤအကောင်းဆုံးအလင်းတန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအညီအမျှပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် LED အလင်းအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် (အသုံးပြုသည့်မှန်ဘီလူးများ၏အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍) ပို၍ directional ဖြစ်သောကြောင့် shading ပိုမိုကျရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤနည်းစနစ်များသည်ပန်းပွင့်နေရာများအားလုံးနှင့် ၁၂ စင်တီမီတာမှ ၁၆ စင်တီမီတာကြားရှိပန်းပွင့်နေရာများအားလုံးအားအလင်းနှင့်ထိတွေ့နိုင်စေရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဤအဆင့်အောက်ရှိပန်းများ (ရှိလျှင်) ကို (ပန်းပွင့်လန်း) သံစဉ်၏သီတင်းပတ်နှစ်ကုန်တွင်ခုတ်လှဲရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်အပင်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုမြင့်မား။ ပိုမိုကောင်းသောပန်းပွင့်ထိပ်များသို့တွန်းပို့ပေးသည်။ ဤအပိုင်း၏အပေါ်ဘက်ရှိပန်ကာကြီးမားသောအရွက်များကိုတဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားပစ်သင့်သည်၊
By week four of Bloom it is recommended that you remove all large fan leaves to allow the flowering sites maximum unobstructed exposure to light. At this stage, your canopy should be as even as possible and the top should be around 24″ to 36″ from the light source. The more consistent access your canopy has to optimal lighting conditions the better.
အပူချိန်သည်ကုန်းတွင်းပိုင်းအပင်များတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အခြေခံစည်းမျဉ်း၊ ပိုပူလေလေ၊ သူတို့ကြီးထွားလေလေဖြစ်သည်။ အပူချိန် / စက်ရုံဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှအပင်များသည်ရေ၊ CO2၊ အောက်စီဂျင် (အမြစ်များသာ) နှင့်မှန်ကန်သောအချိုးများတွင်အာဟာရများပိုမိုလိုအပ်သည်။ စက်ရုံသည်အနိမ့်ကျဆုံးချိတ်ဆက်အဖြစ်သာလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဤသွင်းအားစုစံညွှန်းများထဲမှတစ်ခုသည်ကန့်သတ်ထားပါကကျန်ရှိနေသောအကန့်များအဆင့်ကို မူတည်၍ အပင်ကြီးထွားမှုနှေးကွေးလိမ့်မည်။
root ဇုန်အပူချိန်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 85F ထက်မြင့်သောလေအပူချိန်ကိုလည်ပတ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 75F အောက်ရှိပျမ်းမျှအမြစ်ဇုန်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အချိုးအစားအေးသောမှောင်မိုက်ကာလလေထုအပူချိန်လိုအပ်သည်။ ရေထဲတွင်အောက်စီဂျင်ပြည့်နှက်မှုသည် ၇၅ F အထက်တွင်လျှင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်။ ဒါကြောင့်ပျမ်းမျှအမြစ်ဇုန်အပူချိန်ကို ၇၅F ထက်အများကြီးမြင့်အောင်ခွင့်ပြုခြင်းသည်သင်၏အာဟာရဓာတ်တိုင်များသို့မည်မျှအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်သွင်းသည်ဖြစ်စေအောက်ဆီဂျင်အတွက်အမြစ်များကိုငတ်မွတ်စေပါလိမ့်မည်။ အမြစ်ရောဂါပိုးများသည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်နည်းသောအခြေအနေများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်အပူချိန် ၈၅F အထက်အခန်းအပူချိန်သည်အတွေ့အကြုံရင့်သောစိုက်ပျိုးသူများသာမကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Cooler nutrient tank (60-75F) temps သည်မှောင်မိုက်သောကာလလေထုအပူချိန်ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ 75F အောက်ရှိအမြစ်ဇုန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ ရေလောင်းသည့်အချိန်တွင်အာဟာရသည် 60f ထက်ဘယ်သောအခါမျှအေးမနေသင့်ပါ။
ကြီးထွားလာသောပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းသည်ထူးခြားသည်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အစားထိုးစရာမလိုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ 83F-85F လေထုအပူချိန်ကိုစတင်နိူင်ရန်နှင့်သင့်အနေဖြင့်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာခြင်းအားဖြင့်သင်၏လမ်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ပါရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ များပြားသောမှတ်စုများကိုမှတ်သားခြင်းဖြင့်ကြီးထွားမှုမှကွဲပြားမှုကိုကြီးထွားစေလိမ့်မည်။ သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်အရာနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုသင်တိကျစွာအဖြေပေးနိုင်လိမ့်မည်။ အာဟာရများ / စိုထိုင်းဆ - အဟာရဓာတ်လျော့နည်းအောင်သုံးပါ
လွန်ခဲ့သော:နည်းပညာတွင်အလင်းသည်အလင်း S ကိုကြီးထွားစေသည်
နောက်တစ်ခု:What is The Right Number of Plants For My Grow Setup?